ပထမဦးဆုံး နှင့်တစ်ခုတည်းသော မြန်မာဘာသာဖြင့် free online courses များကို သင်ကြားပေးသော videos များကိုစနစ်တကျ စုစည်းတင်ပြထားသည့် online education portal တစ်ခုဖြစ်သည်။
Statistics for Data Science. သင်ခန်းစာလေ့လာရန်ကြာချိန် စုစုပေါင်း ( 12 ) Hours. Statistics for Data Science သင်ခန်းစာကို MYANMAR DATA SCIENCE မှသင်ကြားပေးထားပါတယ်…။ သင်ကြားရတာအဆင်ပြေပါက ကြယ်ပွင့်လေးများဖြင့် Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဂျပန်စာကို အခြေခံက စပြီး လေ့လာကြရအောင်
ဂျပန်စာကို အခြေခံက စပြီး လေ့လာရအောင် ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာကို Myanmar BOCတွင် လေ့လာသင်ကြားနိုင်အောင် Su Ei Japanese Language Online Class မှ စုစည်းပေးထားပါသည်။
Students: 1372 Students
TOP Seoul Learning Korean Language မှ သင်ကြားထားသော ကိုရီးယားဘာသာစကားအခြေခံ သင်ခန်းစာများကို စုစည်းထားပါတယ်။ ကိုရီးယားဘာသာစကားကို စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို စသင်လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ သင်ခန်းစာကို Start Now ပြုလုပ်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါသည်။(Start Now ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Previewပြုလုပ်ထားသော သင်ခန်းစာများကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Students: 1376 Students
Japan N5 grammer
Nan San Japanese သင်ကြားထားသော ဂျပန်ဘာသာစကား N5 Grammerသင်ခန်းစာများကို Myanmar BOCတွင် စုစည်းထားပါတယ်။ Enrollနှိပ်ပြီးစတင်လေ့လာနိုင်ပြီ။
Facebook Marketing Course Myanmar JAB TV MM မှ Facebook Marketingသင်ခန်းစာများကို MYANMAR BOCမှ စုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီသင်ခန်းစာကို ကြည့်ရှုပြီး အချိန်ရရင် သင့်ရဲ့ Feedbackကိုလည်းမျှဝေပေးသွားပါဦးခ ကြယ်ငါးပွင်းပေးကာ သင်ခန်းစာကို Reviewပြလုပ်နိုင်ပါတယ် JAB TV MM See Other Course
# Laravel Tutorial Myanmar Laravel Course ကို အကောင်းဆုံးလေ့လာနိုင်ရန်အတွက် Teacher Yee Myint Soe မှသင်ပြထားသော Laravel Course ကို MyanmarBOC မှ မိတ်ဆွေတို့ ထိရောက်စွာလေ့လာနိုင်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Laravel သင်ခန်းစာများကို လေ့လာသူများ အလွယ်တကူနာလည်လွယ်အောင် ရှင်းပြပေးသော Teacher Yee Myint Soe အားလည် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Related Course : PHP Basic Tutorial Progressive Web App ဆိုတာဘာလဲ? # Laravel Tutorial Myanmar
Teacher Yee Myint Soe
August 14, 2020 / 1 Comment
React Tutorial Video များကို MyanmarBOC Learning Platform တွင် enroll လုပ်ပြီး အခမဲ့ လေ့လာနိုင်ပါပြီး။
Teacher Thet Win Aung
Java Lesson Myanmar
Java Programming Language ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာလိုသူများအတွက် Teacher Waifer Kolar မှာ သင်ကြားပေးသော Tutorial Videos များအားစုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
Flimora video Editing သင်ခန်းစာတွင် Flimora ကိုအသုံးပြုပြီး video ဖန်တီးခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် video Edit လုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ဖန်တီးချင်သူတို့အတွက် အကြိုက်တွေ့စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar BOC မှာ သင်ခန်းစာများကို အခမဲ့ သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ သင်ခန်းစာသင်ယူလေ့လာဖို့ Register ပြုလုပ်ပါ။ Register ပြုလုပ်ပြီးပါက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင်ခန်းစာကို သွားရောက်ပြီး Enroll ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလေ့လာလိုသောသင်ခန်းစာအား Enroll ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Preview video များကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Enroll ပြုလုပ်ထားပါက preview ကြည့်ရှုနိုင်သော Video များအပြင် မိမိလေ့လာနေသော သင်ခန်းစာ၏ ပြီးစီးမှု course progress အခြေအနေကိုပါ သိရှိနိူင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Lesson တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း complete button နှိပ်ပေးပါ။ …
Learning Design Model ကို ဘယ်သူတွေလေ့လာသင့်လဲ လေ့လာသူမှန်သမျှ ကိုယ့်လေ့လာမှု Self-learning ကို အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် Learning Design Model ကို လေ့လာသင့်ပါတယ် သင်ခန်းစာကိုလေ့လာရန် MyanmarBOCတွင် Registerပြုလုပ်ပြီး သင်ခန်းစာကို Enrollပြုလုပ်ကာ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ See All Courses Websiteဈေးနှုန်းကြည့်ရန်
HR & Manager
June 24, 2020 /2Comments
HR & Manager Training သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာချင်သူများအတွက် Myanmar BOCမှာလေ့လာနိုင်ပါပြီ။ MyanmarBOCမှာ အခမဲ့ (Free Training) Videoများကို လေ့လာသင်ယူနိူင်ဖို့ Enrollပြုလုပ်ထားပါ။ Enrollပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါက Previewကြည့်ရှုနိုင်သောသင်ခန်းစာများကိုသာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။Enrollပြုလုပ်ထားပါက training Videosအားလုံးကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ See All Courses websiteပြုလုပ်လိုပါက ဆက်သွယ်ရန်